Cali Khaliif “Waxaanu Magacaabaynaa Guddi Somaliland La Hadasha…..”. |
Cali Khaliif “Waxaanu Magacaabaynaa Guddi Somaliland La Hadasha…..”.
Hoggaamiyaha kooxda nabad diidka ah ee Khaatumo-seeg Cali Khaliif Galaydh, ayaa sheegay inuu magacaabayo guddi ka kooban qaybaha maamulkiisa oo Somaliland wada xaajood la gasha.
Hadalkaasi ayuu ka sheegay Shir kooxdiisa uga socday degmada Balicad oo uu dhawaan fadhiisin ka dhigtay. Shirkaasi oo uu soo xidhay, socdayna muddo laba todobaad ah.
Waa Markii u horaysay ee Cali Khaliif madal haldoorka dadka ku taabacsan siyaasadda Khaatumo buuxaan ka sheego wada hadalka uu Somaliland la galayo oo uu sheegay in loo magacaabi doono dadka ugu magaca dheer kooxdiisa.
“Fadlan hadalkaa dhegaystay, Somaliland wada hadal noo bilaamay oo meel noo marayaa ma jiro. Cidii idiinla timaada ee qof qof idiinla timaada ama qabiil qabiil idiin kula timaada waa beentood. Waan ku celinayaa ee wax wada hadal ah oo noo bilaaban, oo xataa bilaw ba ah oo khaatumo haddaanu nahay aanu Somaliland la galay ma jiraan,” ayuu yidhi Cali Khaliif.
Cali Khaliif Galaydh, ayaa shirka u sheegay inuu Somaliland la hadlayo “ Khaatumo waxay diyaar u tahay inay la hadasho meeshii xaajo ka gashaba, Somaliland baanu la hadlaynaa oo lama dhuumanayno, saddexda gole ayaa isla ogaanaya, guddi ayaanu u saaraynaa, dadka ugu fiican ee ugu khaatumaysan, ee ugu magaca dheer reer Khaatumo ayaanu u magacaabaynaa.
Kuwaaba hadda waxay leeyihiin, 9 ayay guddidaasi noqonaysaa oo 7 waa la magacaabay, waa beentood, wax la magacaabay ma jirto ee waa beentood, Illaahay baana ka jasaa’I marinaya beenta, munaafaqnimada iyo xaasidnimada ay wadaan, wali lama magacaabin, lalama dhuumanayo ee waa la magacaabi. Saddexda golena way isla ogolaan, waxaan taas ahayn oo dhaqan noo noqonayaana ma jiro,” ayuu yidhi Cali Khaliif Galaydh.
Cali Khaliif, waxa uu ka digay in cid aan metelin isaga iyo kooxdiisu aanay Somaliland wada hadal la bilaabi Karin “ Waar hooy warkaasi waa ina waxba kama jiraan, Somaliland u malayn maayo inay iyaguna sheegayaan, wax qarsoomayana maaha, haddii aanay guddida aanu sheegaynaa wax la bilaabin, waar hooy nin kaligii wax wada iyo cid wax qarsanaysaa ma jirto,” ayuu yidhi Cali Khaliif.
Dhinaca Somaliland ayaan wali wax hadal ah oo arrintan ku saabsani ka soo bixin. Marar hore ayay xukumaddu sheegtay inaanay wada hadal la furayn Cali Khaliif, iyagoo ku deedafaynaya inaanay jirin cid ama bulsho uu metelo oo lagula hadlo.